खाडीको राप र तापले उजेलिएका पुनर्वासका शुकबहादुरको राजनीति यात्रा – Karnalikhabar
खाडीको राप र तापले उजेलिएका पुनर्वासका शुकबहादुरको राजनीति यात्रा
उनी भन्छन् : समाजसेवा गर्ने भए राजनीतिज्ञ आर्थिक रुपमा सबल हुनुपर्छ ।
हरिलाल जोशी –
पुनर्वास – कञ्चनपुरको विकट क्षेत्रको रुपमा चिनिने पुनर्वास नगरपालिका–३, रामबस्तीमा बस्दै आएका शुकबहादुर तामाङ निकै साहसी युवाका रुपमा परिचित छन् ।
उनी वि.सं. २०३५ साल मंसिर १२ गते चितवन जिल्लामा बुवा दावाटेसी तामाङ्ग र आमा ठुलीमाया तामाङ्गको कोखबाट जन्मिएका पहिलो सन्तान हुन् ।
जन्मथलो चितवन भएपनि उनी पुनर्वासकै सेरोफेरोमा हुर्किएकाले होला सायद उनीमा पुनर्वास प्रतिको स्नेह धेरै देखिन्छ । हुन त जन्मदिने भन्दा कर्म दिने मान्छे महान हुन्छ भन्ने भनाई नै छ ।
पुनर्वासमै हुर्किएका तामाङले उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरका छन् । अध्ययन पश्चात गाउँमा वैदेशिक रोजगारीमा लागि जाने युवाहरुको लर्को नै हुने गर्थे । त्यै लर्कोले युवा नेता तामाङलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार बनायो ।
गाउँमा उनको परिवारलाई आर्थिक रुपमा सबल परिवारको रुपमा मानिन्थ्यो । घरको जेठो छोरो भएका कारण उनीलाई परिवारको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि थियो । वि.सं. २०६२/०६३ को जनयुद्धले देशलाई संकटकालीन अवस्थातर्फ धकेलिरहेकै बेला उनी रोजगारीकै सिलसिलामा मलेसिया पुगे । मलेसिया पुगेपछि काम सोचेअनुसारकै त पाए, तर मलेसियाको प्रचण्ड गर्मीले उनको कमाउने सोच हराएर घरपरिवारको नजिक आफ्नो देश नेपालमै बस्छु भन्ने बनायो । त्यसो सोच्दा सोच्दै करिब दुई वर्ष मलेसियामा बिताएपछि, उनले घरपरिवारसँगै बसेर समाजका लागि केहि गर्छु भन्ने ध्येयका साथ नेपाल फर्किए ।
नेपाल फर्किए लगत्तै उनले एउटा नयाँ व्यवसायको खोज गरे, जो व्यवसाय पुनर्वासमा नै कसैले गरेका थिएनन्। उनले पुनर्वासको आई.बी.आर.डी.मा आर.एस. फुड प्रोडक्सनको नामबाट चाउमिन उत्पादन सुरु गरे । चाउमिनले बजार राम्रै लिएपछि उनले पुनर्वासमा खानेपानीको अभाव रहेको महशुस गरे । केहि समयसम्मको गहिरो बजार अध्ययन पश्चात पुनः नौलो व्यवसायको रुपमा खानेपानी बजारमा ल्याउने योजना बनाए ।
योजनामै सीमित नराखी वि.सं. २०७२ सालतिर पुनर्वासको आई.बी.आर.डी.मै डेली ड्रिड्ढिङ वाटर नामबाट व्यवसाय सुरु गर्दै पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रका केहि उपभोक्ताहरुलाई दैनिकै शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पु¥याए । व्यवसायसँगै उनको भित्रि चाहना समाजसेवा नै थियो । समाजसेवा सँग-सँगै व्यवसायतर्फ धकेलिँदै गए, उनले आर्थिक रुपमा सबल हुनसके मात्रै समाजसेवा गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा बोकेका थिए ।
उनी व्यवसाय र राजनितिमा उत्तिकै दौडिरहे । उनी आफ्नो आर्थिक पक्ष सबल बनाउन अहिले थप नयाँ व्यवसायको रुपमा ईट्टा उद्योग सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि कन्स्ट्रक्सनका काममा समेत स्थापित भएका छन् ।
समाजकै लागि केहि गर्न सक्छु भन्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटे । उनले महाधिवेशनबाट नगरलाई हाक्ने मनसाय बनाए र नगर सभापतिको उम्मेदवारी दिए । पार्टी भित्रको गुटबन्दीका कारण नगर सभापतिमा जित्नु उनका लागि त्यत्ति सहज भने थिएन । त्यै पनि शुकबहादुर सहजै रुपमा सभापति पदको धारण गर्न पुगे ।
काँग्रेश राजनीतिमा उदाउँदा ताराकोे रुपमा रहेका युवा नेता शुकबहादुर झट्ट हेर्दा हसिलो अनुहार, जोस जागरले भरिएका त्यसैमाथि सोझो तामाङ्ग समुदायको छोरोलाई कार्यकर्ताले पनि पत्याए । सोझो देखिएपनि कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पार्टी नेतृत्वलाई कसरी हाक्ने भन्ने विषयमा उनी सक्षम नै देखिन्छ । उनी भित्र निहित कला र वौद्धिक क्षमतालाई हेरेर सबै कार्यकर्ताले उनलाई नगरको सबल र सक्षम नेताको रुपमा आत्मसात गरेका छन्।
पार्टीको विधि र पद्धतीलाई मूलमन्त्र बनाई समाजमा रहेका कुरीति, अन्धविश्वास, विसंगतिका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने निस्वार्थ भावनाले ओतप्रोत युवा नेता हुन शुकबहादुर तामाङ्ग। काङ्ग्रेस पुनर्वासको कमान सम्हालेदेखि कार्यकर्तादेखि आम जनता माझ उनी निक्कैउत्सुकताको विषय बनेको छ ।
यस अघि नेता तामाङ काँग्रेशको ११ औं महाधिवेशनमा तत्कालिन कालिका गा.वि.स. नेपाल तरुण दलको सभापति त्यस्तै १३ औं महाधिवेशनमा पुनर्वास–३ को वडा सभापति बनिसकेका थिए ।
व्यवसायिक धारसँगै नेपाली काँग्रेशको राजनीतिमा सक्रिय देखिएका युवा नेता तामाङ्ग, समाजमा सामान्य रुपमा प्रस्तुत हुने गरेपनि उनको वौद्धिक शक्तिले यतिबेला पुनर्वासको पूरै राजनीति क्षेत्रमा तरंङ्ग मच्चाएको छ । उनलाई समाजमा व्यवसायीको रुपमा मात्रै हैन एक दरिलो कुशल समाजसेवकका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनी समाजमा गरिने वास्तविक समाजसेवाको बारेमा चित्रण गर्न सक्ने एक प्रशिक्षकको पात्रको रुपमा चिनिएका छन् । राजनीति गर्ने व्यक्ति आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुनसके समाजसेवा सार्थक हुने उनको जीवनीबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
अघिल्लो - सलमान खान र मन्त्री आलेबीच भर्चुअल संवाद, सगरमाथा चढ्न निम्तो
४८ लाख चेक बाउन्स आरोपमा गीतकार दर्पण राई पक्राउ - पछिल्लो